श्रीमतीका गहना बैंकमा धरौटी राखी सडक सडक निर्माण गर्ने सिंहलाई बधाई ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार श्रीमतीका गहना बैंकमा धरौटी राखी सडक सडक निर्माण गर्ने सिंहलाई बधाई !
श्रीमतीका गहना बैंकमा धरौटी राखी सडक सडक निर्माण गर्ने सिंहलाई बधाई !
on: २२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०८:०४ In: समाचारTags: श्रीमतीका गहना धरौटी राखी छ किलोमिटर सडकNo Comments
ललित सिंह/बझाङ । जिल्लाको तलकोट गाउँपालिकाअन्तर्गतको रुपातोला—तलकोट—खौला सडकखण्ड निर्माण गर्दा आफ्ना श्रीमतीका नाक कानका गरगहना बैंकमा धरौटी राखी यहाँका स्थानीयले सडक निर्माण गरी गाडी गुडाएका छन् ।
“सडक निर्माण गर्दा धेरै दुःख पायौँ, जस्मा सात तोला सुन बैंकमा राखी डोजरको सम्झौता गरेका थियौँ । अहिले विभिन्न निकायबाट करीब रु २९ लाख समितिमा आएको छ । यसमध्ये डोजर मालिकलाई दिनुपर्नेलगायत साहुबाट रु तीनका दरले ब्याजमा ऋण निकालेर अहिले रु ३४ लाखको भर्पाइ बनाइएको छ,” रुपातोला—तलकोट—खौला सडकखण्ड निर्माण समितिका सचिब रघुवीर सिंहले बताए ।
सरकारले गर्न नसक्ने काम एक व्यक्तिले घरघडेरी धरौटी राखी सबै जनतालाई यातायातको सुविधा दिएकोमा उनले धन्यवाद दिए ।
“शुरुवातमा विभिन्न व्यक्तिबाट रु २० लाख जम्मा भयो । स्थानीय तहबाट सबै गरी रु १८ लाख सहयोग प्राप्त भयो । अहिलेसम्म उधारो रु ४३ लाख तिर्न बाँकी छ । बल्लबल्ल अहिले धेरैपछि सफलताको एक बिन्दुमा पुगेका छौँ । अहिले यस क्षेत्रका जनताले यसै बाटोबाट सेवा सुविधा लिएका छन्,” तलकोटी राजा ९रजवार० नारायण सिंहले बताए ।
“कुनै पनि योजना सफल गर्नका लागि योजनाको यथार्थ बजेट नहुँदा समितिका दाजुभाइले दुःख पाएका छन् । अब जनता बाटोमा हिँडेका छन्, जनतालाई सुख छ,” उनले भने ।
जनताका लागि दुःख गर्नु राम्रो हो तर आफ्नै घरबार विजोग हुने गरी धेरै जोखिम उठाएर काम गरेकामा समितिलाई धन्यवाद, उनले भने ।
अहिलेसम्म रु ६४ लाखमा रुपातोलादेखि तलकोट खौला सडकखण्डमा खर्च गरेर निर्माण गरेका छन् । यस क्षेत्रमा पनि सरकारले गर्ने काम स्थानीय जनताले गरेका छन् । जनताका समस्यालाई ध्यान दिने सरकारको अनुभूति पाइयोस्, सिंहले भने ।
Tags: श्रीमतीका गहना धरौटी राखी छ किलोमिटर सडक
महाकालीको दोधारा—चाँदनी झोलुंगे पुल चुँडिदै
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १४:४३
२२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०८:०४